I-Rainforest Cottage e-Beautiful Currumbin Valley
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Fiona & Geoff
I-Littlewood Cottage iyimibhangqwana ekahle ebuyela emuva ngesitayela sesimanje, esikhululekile esibekwe phakathi kwezihlahla, izinyoni kanye nezindawo ezinhle zesigodi. Zicwilise echibini, ulale ngaphansi kwesambulela isikhathi esithile esibandayo noma uzulazule uye engadini yemifino bese uhlangana nezinselele. Qhubeka ukhuphuke igquma uthole ipikinikini enokubukwa okuhle ku-Tomewin Mountain Range. Nethezeka emphemeni wakho wangasese, lalela izinyoni, bukela inyanga iphuma noma umangazwe izigidigidi zezinkanyezi phezulu. Nethezeka, Yehlisa umoya, Hlola ukuzikhethela kwakho...
I-Littlewood Cottage ihlala endaweni yethu enhle engamahektare angama-52, ebheke eCurrumbin Creek enokubukwa kwesigodi nezintaba.
I-Littlewood Cottage iyi-Couples Retreat yabantu abadala futhi ngenxa yalokho, ikotishi nempahla yethu akuhlali izinsana noma izingane.
Sicela ubheke inqubomgomo yethu Yemithetho Yendlu.
I-Cottage inesitayela sesimanje, esikhululekile futhi inendawo yokulala eyinkosi enezingubo zokuhamba, igumbi lokugezela eline-ensuite, ikhishi elihlomele, igumbi lokuphumula eline-air con kanye ne-heater kanye nedekhi yangasese enokubukwa kwehlathi.
I-Master Bedroom -
Amathebula Asemaceleni namaLambu
Ithebula Lokugqoka Nendle
Sliding Door ukuya emphemeni wangasese
Hamba Ugqoke Ingubo (Isibuko esigcwele ubude, ukulenga ngeziphanyeko zamajazi, amashalofu, indawo yokubeka imithwalo, i-ayina nebhodi loku-ayina, isiphephetha-moya sezingubo, isisefo)
Igumbi lokugezela le-Ensuite (Ize elinamakhabethe, indlu yangasese, ishawa enkulu, indawo yokomisa izinwele, iheater nefeni)
I-shampoo, i-conditioner, nensipho,
Ikhishi/Indawo yokudlela -
I-Cutlery kanye nezitsha
1 1/2 Usinki nge-Mixer
Igedlela kanye neToaster
Itafula lokudlela nezihlalo
Igumbi lokuphumula -
Usofa Omume Ka L Omkhulu
I-Smart TV (iNetflix, iStan, i-inthanethi njll.)
I-Air Conditioning & Heating
Izincwadi, Omagazini & Imidlalo
Idekhi yangasese -
Indawo yokuphumula yangaphandle ene-Chaise ne-Ottoman
I-Yoga Mats (isiteki siyindawo enhle yamaseshini e-yoga ekuseni noma ntambama)
Iphasiwedi iyatholakala nge-WIFI yamahhala ngesikhathi sokuhlala kwakho
Ukufakwa kweselula -
Ungathola imibhalo ku-cottage, kodwa izingcingo eziphathwayo azithembeki kangako.
Lezi zingafinyelelwa emnyango wendawo.
I-Cottage ayinazo izindawo zokuwasha, kodwa ukuhlala isikhathi eside izivakashi zingacela isevisi yokuwasha noma ukusetshenziswa komshini wokuwasha endlini enkulu ngokuhlelwa.
I-pool yokubhukuda ekhululekile ingeyakho ongayijabulela nganoma yisiphi isikhathi njenge-cabana enezihlalo ezikhululekile zangaphandle, ifeni yophahla kanye ne-ambience engadini ephilayo.
Indawo yethu ilungele ukubuka izinyoni, ukubuka izinkanyezi ngobusuku obucwathile, ukubona okhanyikhanyi (imvamisa ezinyangeni zasebusika) futhi indawo yokubhukuda iyindawo enhle yokubona amaxoxo kusihlwa sasehlobo.
Uma ungumlimi okhuthele noma unesifiso sokufunda kabanzi mayelana nezinhlobo eziningi zezitshalo zasezindaweni ezishisayo esizitshala kule ndawo, vele ubuze futhi sizokujabulela ukukubonisa nxazonke.
Amanzi ethu aphuma ngqo ethafeni lamanzi laseCurrumbin Valley elitholakala ezintabeni zaseSpringbrook. Awukwazi ukuba ngcono noma usha!
Landela i-@littlewoodcottage ezinkundleni zokuxhumana ukuze uthole ulwazi lwakamuva nezindaba zasendaweni.
Futhi kuyindlela enhle yokuzijwayeza ngendawo yasendaweni ngaphambi kokuhlala kwakho :)
4.99(134 okushiwo abanye)
Uyemukelwa e-Currumbin Valley enhle, indawo yasemakhaya ebabazekayo nepharadesi labathandi bemvelo. Hlola izindawo eziwugwadule zemvelo zeMt Cougal National Park kanye neCurrumbin Rock Pools edumile.
Hlola izimakethe zabalimi bendawo, izindawo zokubuka ezinhle nemigodi yokubhukuda egcwele izitshalo nezilwane zomdabu noma ujabulele amabhishi, izindawo zokuthenga nezokudlela okuqhele ngamaminithi angu-15 kuphela eCurrumbin nasePalm Beach.
Abavakashi abavela e-Littlewood Cottage bangahlola kalula indawo yasendaweni yaseGold Coast, i-SE QLD kanye nenyakatho ye-NSW.
Ibungazwe ngu-Fiona & Geoff
Indlu yethu iseduze nekotishi, futhi itholakala ngendawo engaphandle yomphakathi.
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho futhi siyakwazisa okwethu, kodwa sizotholakala noma nini lapho sikwazi ukukusiza ngeziphakamiso zomsebenzi, ulwazi lwendawo nezeluleko.
Singeluleka nangezindawo ezihamba phambili ongazivakashela, izindawo zokudlela kanye nokunikeza izinkomba zokuhamba.
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho futhi siyakwazisa okwethu, kodwa sizotholakala noma nini…
UFiona & Geoff Ungumbungazi ovelele